8 Oraahda No Designer Graphic Ha Yidhaahdo | Abuurista khadka tooska ah
Qaabka ay macaamiisheena noogu arkaan xirfadlayaal waa qodob ay tahay in aynaan iska indhatirin. Marka lagu daro shaqooyinkeena iyo mashaariicdeena, waxa na taageeri doona waxay noqon doonaan habka aan ula dhaqanno ulana xiriirno macaamiisheenna. Qaabka aan u tixraaceyno shaqadeena ayaa wax badan ka sheegaysa sida aan u uureysaneyno iyo gaar ahaan sida aan nafteena isugu qaadno inaan nahay naqshadeeyayaal qaabeed
Shabakadda waxaa ku yaal talooyin fara badan oo ku saabsan sida loo wajaho wareysiga shaqada ama xitaa xiisaha decalogues (sidan oo kale) loogu talagalay naqshadeeyayaasha garaafka. Maanta waxaan jeclaan lahaa inaan idinla wadaago xulasho jumlado ama oraahyo aan wax badan kuu faa'iideyn doonin xirfadle ahaan sidaa darteedna aad iska ilaaliso qiimo kasta Weligaa ma tiri iyaga?
Waan ka dhigi karaa mid ka raqiisan
Hadalkani wuxuu la mid yahay hal shey: Badeecada ama shaqada aad qaban doontid ma lahan qiime ama la isku raacsan yahay. Markaad dhahdo waad ka jaban kartaa waxaad sheegaysaa inaad qaban karto shaqo isku mid ah (isla saacado iyo hawlgallo) qiime aad u hooseeya. Adigu waad dhayalsaneysaa shaqadaada naftaada dabcan tani kumaba haboona adiga.
Ma ihi kan ugu fiican
Tani waa mid kale oo ka mid ah hadalada ugu isticmaalka badan, gaar ahaan naqshadayaasha bilowga ah. Xusuusnow inaad si hoose u horumarineyso shaqo suuq geyn, iibin iyo qancin. Haddii aad dhahdo inay jiraan naqshadeeyayaal badan oo adiga kaafiican, waxaad siineysaa macmiilkaaga sababo uu ku waayo oo uu raadsado mid kale oo garanaya sida loo horumariyo shaqadooda si wax ku ool ah. Si uun ayaad u carqaladeyneysaa tababarkaaga waxaadna yareynaysaa macaamiishaada naftaada. Tan macnaheedu maahan in is-hoosaysiinta ay aad u badan tahay, laakiin waa wax uun inaad is-hoosaysiiso oo aad mid kale is liidid.
Tani waa wax dhameystir ah oo aan sameeyo marka lagu daro shaqadayda
Haddii aan la hadlayo dhakhtar, garyaqaan ama koronto yaqaan oo uu ii sheegay in tani ay tahay wax uu ku sameeyo waqtigiisa firaaqada iyo kaabaya shaqadiisa dhabta ah, waxaan ku soo gabagabeyn karaa qaab fudud oo fudud: Wuxuu sameeyaa oo uusan naftiisa u hurin dhab ahaaneed iyo gebi ahaanba daawo, sharci ama koronto, sidaa darteed waxay u badan tahay inuu khalad sameyn doono ama uusan sameyn doonin, inuu ku horumarin doono shaqadiisa qaab ka indho sarcaadis ah marka loo eego qof ku ducaystay goobtiisa. Haddii aad naftaada u hurto dhowr arrimood, ha ka faalloonin arrintaas maxaa yeelay taasi waxay ka dhigi kartaa macmiilka inuusan aaminin.
Waxaan ku shaqeeyaa jiifka
Maalmahan tirada wariyeyaasha (naqshadeeyayaasha) si buunbuunin ah ayaa loo sarreeyaa, taasi wax cusub ma aha. Laakiin yaa, hadday ahaan lahayd, u sheegi lahaa macmiilkaaga inuu ka shaqeeyo dharka hurdada? Marar badan ayaan ka hadalnay kalsoonida ka dhexeysa nashqadeeyaha iyo macmiilkiisa, laakiin si daacadnimo ah, tani kalsooni ma leh. Tani waxay ku riixaysaa xuduudaha inay mar kale naftaada u dhintaan xirfadle ahaan. Haddii aad xirfadle tahay iyo haddii kaleba, shaqadaada (aragti ahaan, uguyaraan waa inay sidaas noqotaa) waxay la mid tahay tii aad ku qaban lahayd xafiis ama shaqo kasta. Pajamas kuma xirna meel kasta halista iyo saxnaanta xirfadle aqoon leh, markaa waad ogtahay ... waa mamnuuc!
Wax fikrad ah kama haysto
Caqli ahaan ma tihid guuru waxaana jiri doona waxyaabo baxsada sida qof bini aadam ah. Laakiin sida aad ula macaamilayso arimahan macmiilkaaga sidoo kale wax badan buu kaaga sheegayaa. Isku day inaad wax ka qabato su'aalahan ama arimahan (haddii ay soo baxaan) nimco, fudayd iyo fudayd. "Wax fikrad ah kama haysto" ma aha jawaab sax ah, u fiirso sida aad ula xiriirto awoodahaaga laakiin sidoo kale sida aad uga faalooto xaddidaadaada.
Qiimahaygu way jilicsan yihiin
Maya maya maya iyo maya. Macaamiil kasta oo weedhan maqla wuxuu jaraya miisaaniyadooda kahor intaadan xitaa dhammaysan. Adigu waxaad tahay qofkii uguhoreeyay ee qiimeeya shaqadaada, majirto waxbadan oo qarsoodi ah. Ku dabacsanaanta arrimaha noocan ah waxay la mid tahay aqbalida jabinta iyo hoos u dhigida waxa aad markale sameyso. Ha sameyn!
Waxaan ku sugnaa xaflad xalay goor dambe
Waa sheeko gebi ahaanba kharash lagu bixin karo oo aan loo baahnayn noloshaada shaqsi ahaaneed ee waxa ay sameyn doonto oo dhan ay ka beddeleyso sawirkaaga xirfadeed Dadku waxay aaminaan dadka dadaalka badan, masuulka ah, sidaa darteed waa muhiim inaad barato inaad sameysatid laba waji oo madaxbanaan noloshaada: mid xirfadle ah iyo mid shaqsiyeed. Markuu mid kale fara galiyo kan kale, arrimihu way isku murgi karaan qaab aan loo baahnayn.
Taasi waa wax aad u fudud in la sameeyo
Ma fududahay in la sameeyo in macaamilku isagu isagu sameyn karo? Marka maxaa faa'iido ah oo intaas oo sano ah oo aad wax baraneysay ama adiga kuu shaqeyneysay? Faallooyinka noocan ahi waxay dhiirrigelinayaan kor u qaadista aan rasmi ahayn iyo habacsanaanta iyo aragtida halista ah ee naqshadeeyayaasha garaafka iyo kuwa u heellan adduunka isgaarsiinta iyo muuqaalka. Waa mamnuuc!
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » General » Design Graphic » 8 Oraahda No Designer Graphic Ha Yidhaahdo